Duqii hore ee Muqdisho oo ka hadlay waxa ka jira inuu bixiyay dhulka Biyaaso Liibaro | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Duqii hore ee Muqdisho oo ka hadlay waxa ka jira inuu bixiyay...
Duqii hore ee Muqdisho oo ka hadlay waxa ka jira inuu bixiyay dhulka Biyaaso Liibaro
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ka hadlay warqadii 30-kii January 2018 ka soo baxday xafiiska Guddoomiye Yariisow ee ku saabsaneyd dhulka Biyaaso Liibaro (Barxadda Ceelgaabta) ee degmada Xamar Jajab.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir (Eng. Yarisow) ayaa Talaadadii ina dhaaftay joojiyey dhismaha ka socda dhulka danta guud ee Biyaaso Liibaro ee ku yaalla aagga Ceel gaabta ee degmada Xamar Jajab, waxaana warqada ka soo baxday Guddoomiye (Yariisow) lagu sheegay dhulkaas inuu bixiyay Guddoomiyihii hore Yuusuf Xuseen Jimcaale.
Duqii hore ee Muqdisho oo la hadlay TV-ga Universal ayaa sheegay inuusan dhulkaas bixin, balse shirkadda ECCO oo uu sheegay in xilligaasi ay Nadaafadda kala shaqeyneysay ugu tala galeen in qashinka halkaasi dhigtaan, kadibna ka qaataan.
Sidoo kale Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay Guddoomiye Yariisow inuu xaq u leeyahay inuu joojiyo dhismaha, balse wuxuu tilmaamay in muhiim ay aheyd in miiska la soo wada saaro dhammaan warqadaha arrintan la xiriira, si banaanka loo keeno shakiga jira.
Wuxuu sheegay dhulka Biyaaso Liibaro in la bixiyay bishii January 2018, muhiimna ay aheyd waraaqda waxa lagu bixiyay in miiska la soo saaro, isaga oo sidoo kale tilmaamay inuusan joogin January 2018, oo uusan aheyn Guddoomiye.
Guddoomiye Yuusuf ayaa sheegay inta uu xilka hayay inuusan dhul bixin waliba sifo sharci daro ah, wuxuuna tusaale u soo qaatay Beerta Nabadda oo uu sheegay in ay kireeyeen Maamulkii isaga ka horeeyay.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir haddana ah Lataliyaha dhanka siyaasadda Madaxweynaha Soomaaliya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in dhulka dhawaan uu dhismihiisa joojiyay duqa Muqdisho uu yahay dhul danguud ah sidoo kalena ay sharci darro tahay in la bixiyo lana dhisto.
Tarsan waxaa uu sheegay in dambi weyn ay tahay in dhulkaas oo kale lagu wareejiyo dad gaar ah, waxaana uu xusay in qofkii bixiyay iyo kii qaatayba ay dambi ku jiraan.